Ungayitshintsha njani imephu ukusuka kwi-NAD27 ukuya kwi-WGS84 (NAD83) nge-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Indlela yokutshintsha imephu esuka ku-NAD27 ukuya kwi-WGS84 (NAD83) nge-AutoCAD
Indlela yokutshintsha imephu esuka ku-NAD27 ukuya kwi-WGS84 (NAD83) nge-AutoCAD
Ngaphambi kokuba sithethe malunga nokuba kutheni kwimeko yethu, ininzi yemifanekiso yamandulo ku-NAD 27, ngelixa i-international trend is usetyenziso lweNAD83, okanye abaninzi bayibiza iWGS84; nangona bobabini basenkonzweni efanayo, umahluko uvela kwi-Datum (bahluke kuphela kwigridi ye-UTM).
Abaninzi ukungena isiphithiphithi eyoyikekayo bakholelwe ukuba mephu kufuneka kuphela ukuba ekutyibilikeni kumda, kwimeko Honduras kumagqabi zokuzoba uthi leemitha 202 6 emantla kunye neemitha empumalanga; Ngokucacileyo oku linokusetyenziswa imisebenzi yasekuhlaleni, kodwa ngokwenza reprojection njengoko kufuneka, i-software yenza uthotho lwemisebenzi geodesic ekutshintsheni ellipsoid yimephu apho zonke eziphezulu zisiwe kwigridi ixabiso ngahlali, ngoko ke ayinakuze idibanise kwimephu "esanda kususwa".
Kungenziwa nge Microstation Geographcis, ARCGis okanye nge Manifold; Kule meko siza kubona ukuba ungayenza njani nge-AutoCAD Map3D. Ndiza kusebenzisa le ndinayo (Imephu3D) ngesiNgesi ukuze sizame ukugcina amanye amagama njengoko ekwimenyu nakumaqhosha nanjengoko umhlobo uCADGEEK ecebise ekuqaleni. Kuya kufuneka uyazi ukuba i-AutoCAD yoMhlaba yeDesktop kunye ne-AutoCAD Civil 3D, ngaphambili imephu ye-AutoCAD iphele iyisicelo esibizwa ngokuba yi-AutoCAD iMephu3D, inkqubo ayitshintshanga kwiinguqulelo ezahlukeneyo.
Siqala ngokukwenza ngemephu engenanto:
Nika umboniso kwimephu yangaphambili
1 Siqala umzobo ongenanto
2. Ukusebenzisa i-"map classic" indawo yokusebenza, siya kwimephu/izixhobo/ukunika inkqubo yolungelelwaniso yehlabathi. Ngale ndlela i-dwg yethu sele inenkqubo yereferensi, uninzi apha alulunganga kuba lunika kuphela inkqubo entsha, enokubangela idatha enempazamo. Kwiqhosha elithi "khetha ulungelelwaniso lweNkqubo" sikhetha inkqubo yemvelaphi.
3. Kulo mzekelo, ndinemephu kwi-NAD27, ngoko sikhetha le nkqubo kwiqhosha elithi "khetha inkqubo yokulungelelanisa"; Ndifuna ukudlulisa oku kwi-NAD83, ndiyabela iqhosha elilandelayo kwiqela elinye (umzobo womthombo). Ngeqhosha elithi "khetha imizobo", ifayile (okanye iifayile) eziza kukhatywa zikhethwa.
4. Ngoku imephu yethu inenkqubo yokulungelelanisa, sivula iphaneli yomsebenzi ukuba ayisebenzi. Inokwenziwa nge-MAPWSPACE bar yomyalelo, emva koko ungene.
5. Ngoku ukusuka "kumhloli weemephu", sicofa ekunene "kwimizobo" kwaye ukhethe "ncamathisela"
6. Ibhokisi yencoko yababini evelayo ivumela ukuba sikhangele isikhangeli sefayile yoqobo, xa siyifumene sisebenzisa iqhosha elithi “yongeza”.
7. Ngomzobo wongeziweyo, ngoku siza kuseka umbuzo. Ukwenza oku sicofa ekunene "kumbuzo wangoku" kwiphaneli yesikhangeli semephu, kwaye ukhethe "chaza".
8. Kwiphaneli yoMbuzo iziphumo, klikha ku-“location”, phantsi ko-“query type”, uze ucofe u-“ok” to accept “all boundary type”. Oku kuthetha ukuba ukuba siza kujongana nomzobo wokuqala kumacandelo awo, kunye "nohlobo lombuzo" oluchazwe, sikhetha ukhetho "lokudweba" njenge "mode yombuzo".
9. Emva kokuchaza umbuzo, sicinezela iqhosha elithi "execute query". Nje ukuba iMaphu ye-3D ye-AutoCAD igqibe inkqubo, senza umyinge wokusondeza kwaye unokuwubona umzobo owaliwe.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ezinye izinto Civil 3D singafani ukususa lula, njengokuba kunjalo yokusongela olunzima (amanani eziliqela, ingxelo) okanye ezo zifana iziqithi (iziza ngaphakathi iziza); ezimiliselwe topologically ngezimdaka njengoko smartline kunye nezinye aberrations. Kuvame iibhloko okanye amaqela ekufuneka lisetyenziswa phambi reprojection.
Ngendlela: I-CAD Geek Blog
AutoCAD 2012 Blog 3D civil Dwg GIS asibonise
Inqwelo yeenqwelo-moya zeJeff 2007
Ukuchaza, Ukuqonda imifanekiso
Ndiyabulela, kwaye ndizama ukubona ukuba oku kunjalo
Fernando Tello uthi:
Molweni nonke, kutshanje ndiye ndaqala ukusebenza kwi-AutoCAD Imephu ye-3D (leyo iza kwi-AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion) kwaye kufuneka ndisebenze kwii-orthophotos ezivela kwilizwe lam (eGuatemala) umba kukuba kufuneka ndenze ingqikelelo yam kuba sele ndinazo iinkcazo eziyimfuneko ukuyicwangcisa, ukuba umntu uyayazi indlela yokwenza okanye unombono ndingayivuyela kakhulu, enkosi kakhulu… ..
Isifundo esihle kakhulu ... kwaye ngokuchaseneyo? Ukuba ndinolwazi kwi-WGS84 kwaye ndinemida yendawo endinokuyiguqula ndenze idathasi yendawo.
Kwinkcazo yeenkqubo zoqhagamshelwano, iiparitha kuphela zingeniswa kwi-datum yendawo ukuya kwi-WGS84. Ngaba ikhona na indlela yokwenza?
Mina, ukuba zibalwa parameters phantsi imodeli Bursa-Ngcuka, kodwa andazi ukuba AutoCAD Map isebenzisa quadratic efanayo.
bulela ngoncedo lwakho! Ndiya kwenza iimvavanyo ezithile kwaye ndikuxelele iziphumo.
Okokuqala kufuneka nikeze u kuhlolwa kwi-dgn yakho, ukhethe indawo ye-UTM i-16 North, kunye ne-datum apho unolwazi.
Emva koko ukhetha umyalelo osele ukhona izisa i-Microstation ifakiwe, ukuthumela kwi-kmz, yena ngokwakhe uguqula kwindawo yeendawo kwaye ukhetha i-wgs84 datum
Yiba walumkisa ngelithi, oku kuya kusebenza kuphela Microstation XM, Bentley Imephu okanye Geographics Microstation iMangaung
Ngaphambi kokulwa ne-Civil 3D fdo, kufuneka ukhangele ukongezwa okwenxenye ye-AutoDesk ukuthumela iimodeli ukuya kwi-kml
Molweni mna labaqalayo entsimini esebenza iimaphu XY iququzelela okanye iflethi xa ndisebenza MicroStation MX okanye AutoCAD Map3d njengoko convierto yesibanzi longuitud, ngoko ukwenza ifayile KML uze ubone ifayile yam Google Eart kwindawo yam UTM yi 16 Ndisuka El Salvador, enkosi ngenkxaso yakho.
Ndifuna inkqubo eyenza i-utm mesh ngokuzenzekelayo kwifayile ye-Autesk Imephu ye-3D, enye endiyenayo yenguqu yangaphambili, idala iphutha kwaye ishiya isicelo
mmm andicinga ukuba ndizisa ithuluzi kule njongo
Ndandibhekisela ekuzenzekeni ngokuzenzekelayo nge-autocad imephu 3d
Hello Geobruu, kule post icacisa ukuba ungayakha njani ... kwezinye amakhonkco kwisithuba umxholo ucacisiwe ukuba uwuqonde.
Into endikwazi ukuyenza ukudweba imigca emele inkqubo yolawulo lwe-utm
Ndisebenzisileyo leyo inkqubo izisa ngokungafihliyo; Isiphakamiso esinikezwe ngumbutho weendawo zendawo yindawo yokufuduka kwevot kodwa ekusebenziseni akusebenzi kakuhle ngenxa yokuba iindawo zokusondela ziza kufutshane ne-equator ukutshintsha kwevolki yokutshintsha.
Kwenzeka ntoni ukuba kwimeko yeHonduras, ilizwe lonke liwela kwindawo enye (16) kunye neqhezu elincinci kwi-15.
Ekugqibeleni, xa kuthelekiswa zombini iindlela zineengqinano ezingaphantsi kweesentimitha ezilishumi kummandla osenzantsi (njengoko ukuhamba phambili kuya phambili kwi-equator)
Kulungile, ngoku kuyacaca.
Kwimeko ethile yendawo yakho, ngaba ubale iiparamitha zakho zenguqu, okanye usebenzisa ezo zibonelelwe ngeNkonzo ejongene neGafa okanye ngaba usebenzisa ngokuthe ngqo loo nkqubo iyenzileyo?
Oko kukuthi, iziphumo zenguqu zichanekile, yintoni umyalelo, okanye ziphantse kuphela (iimitha eziliqela)?
Ewe, ndididekile, ndazama ukucacisa.
kumzobo wokuqala, kwipaneli efanayo, kwindlela yokuqala yokukhetha inkqubo yemvelaphi kwaye kwisibini inkqubo yokuya kuyo, ngoko kwiqhosha lokukhetha umzobo, sithatha imephu esifuna ukuyihlaziya.
Into endiyiqondiyo okanye engayibonayo apho uchaza khona inkqubo yeNAD27 yokuqala.
UMicrosoft ugxininisa ekubhubhiseni ihlabathi 3D